Ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani i-XAMPP ku-GNU / Linux | Kusuka kuLinux
I-Nexcoyotl | | Aplicaciones, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Lesi umhlahlandlela usesikhathini sendlela yokufaka nokulungisa i-XAMPP ku-GNU / Linux, ngesinyathelo ngasinye ngesinyathelo.
1 Kuyini i-XAMPP?
2 Ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani i-XAMPP?
2.1 Ukufaka i-Xampp
2.2 Ukusetha i-XAMPP
I-XAMPP ikusabalalisa ngokuphelele futhi kulula ukufaka i-Apache equkethe iMariaDB, i-PHP, ne-Perl. Iphakethe lokufaka le-XAMPP lenzelwe ukuthi kube lula ukufaka nokusebenzisa ngendlela emangalisayo. Kumahhala ngokuphelele futhi kulula ukufaka ukusatshalaliswa kwe-Apache okuqukethe iMariaDB, i-PHP ne-Perl.
Ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani i-XAMPP?
1.- Landa i-XAMPP yeLinux kusuka ku- https://www.apachefriends.org/es/index.html
2.- Ekupheleni kokulanda sinefayela le- ingobo yomlando.run, okumele siyifake ngale ndlela elandelayo:
Sivula iTheminali nge Ukulawula + T., noma kumenyu yethu.
Singena ngemvume njengezimpande:
Siyaqhubeka nokunikeza izimvume zokwenza i-run kanye nokufaka i-XAMPP
Samukela konke futhi silinda ukufakwa kuze kuqede.
3.- Siqhubeka nokumisa i-XAMPP
Ukucushwa kwe-MySQL (MariaDB)
$ ln -s / opt / lampp / bin / mysql / usr / bin / $ okuyinto mysql $ thayipha mysql $ ls -lart / usr / bin / mysql
Ukusetha umthetho com.ubuntu.pkexec.xampp.policy ukuze iphaneli yokuqhafaza isebenze nezimvume zomlawuli lokhu kuzokhiqiza ifayili le-bash elisebenza xampp-linux-x64-5.6.28-0-installer.run. Ngenxa yalokhu siya emzileni / usr / share / polkit-1 / izenzo futhi senza:
Ngaphakathi kwefayela com.ubuntu.pkexec.xampp.policy sinamathisela ikhodi elandelayo:
Ukufakazela ubuqiniso kuyadingeka ukusebenzisa i-XAMP Control Panel yesikomus auth_admin auth_admin auth_admin /opt/lampp/manager-linux-x1.0.run iqiniso
Ukwakha iskripthi esibhekele ukwenza iphaneli yokuqhafaza ye-XAMPP endleleni / usr / umgqomo / . Kufanele sakhe iskripthi esinegama xampp-control-iphaneli:
thinta i-xampp-control-panel nano xampp-control-panel
Ukusetha i-.desktop ukuvula i-XAMPP imenenja yesevisi yokuqhafaza, sebenzisa imiyalo elandelayo, endleleni / usr / share / application:
Ngemuva kokusebenzisa i-nano application.desktop faka ikhodi elandelayo
[Ukufakwa Kwideskithophu] Amazwana = Qala / Misa Igama le-XAMPP = XAMPP Control Panel Exec = xampp-control-panel Icon = xampp Encoding = UTF-8 Terminal = false Type = Application
Manje sesinesithonjana sokuthi lapho sicindezelwe sizosebenzisa i- pkek, esicela ukungena ngemvume ukuze sinikeze izimvume zokwenza kwiphaneli yokuqhafaza ye-XAMPP. Kufanele kubukeke into enjengale:
Ukuze usebenzise i-mysql, uma wenze ukucushwa kwangaphambilini awusadingi ukuya enkombeni / opt / lampp / bin / mysql -u impande -p ukuze ungene manje udinga ukuvula i-terminal bese usebenza mysql -u root -p.
Manje sesizokwazi ukuphatha imidwebo yethu ye-XAMPP futhi sifinyelele i-mysql ngokujwayelekile ngaphandle kokuya kumkhombandlela we / opt / lampp / bin.
Lesi yiso sonke isiqondisi, ngithemba ukuthi usithandile futhi ungakhohlwa ukushiya imibono yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayifaka kanjani futhi uyilungiselele kanjani i-XAMPP ku-GNU / Linux
Lezi yizindatshana ezaziswa kakhulu, ngokuqukethwe okunemininingwane nokunembile kokuqukethwe kwazo. Ubesize ozakwabo abathanda ukufaka iWindows ukufaka isoftware yeXAMPP. Bengingazi ukuthi kukhona isifaki seLinux, esetshenziselwa ukufaka nokulungisa i-LAMP ngesandla. Nginesiqiniseko sokuthi kuzoba wusizo olukhulu kulabo abafuna ukuba neseva enalezi zici, futhi kuzokwenza abaphathi bezinhlelo nabaphathi abaningi bakhethe ukuyifaka kuWindows, ukukwenza kuseva eneLinux. Ngiyabonga Nexcoyotl ngendatshana enhle kangaka!
Ngiyabonga kakhulu, Federico, ukuphawula kwakho kuyaziswa, ngiyethemba le ncwajana encane futhi elula ibilusizo. Lokhu kungokokuqala ngithemba ukwenza okuningi okuningi.
Kepha nginombuzo, kungani uthinta? Ngiyaqonda ukuthi ukudala ifayili elingenalutho, kepha nge-nano nje, ungadala futhi uhlele ifayela ...
uthinte umyalo osetshenziselwa ukuvuselela izinsuku zokufinyelela nezokuguqulwa zefayela elilodwa noma amaningi, kuze kube manje.
thinta [OPTINO]… FILE…
Uma ingxabano FILE noma igama lefayela lingekho, khona-ke ifayela elingenalutho elinegama elifanayo ne-FILE liyakhiwa.
Iqonde kakhulu - futhi ivame kakhulu - ngale ndlela yokwenza amafayela angenalutho, ukwedlula isihleli nano
Gijima ukuthinta komuntu ukuthola eminye imininingwane.
Sawubona yerko kusengaphambili ngiyabonga ngokuphawula, isizathu esenza ngisebenzise ukuthinta kungenxa yokuthi kuyisiko lami hehe. Futhi uma, njengoba kusho umngane uFederico, umsebenzi wawo udlula ukwenziwa kwamafayela. Uma ufuna ukuthola okuningi, qala i- $ man touch, imikhonzo mngani.
Kepha, ngemuva kokuthinta uguqula ifayela, ngakho-ke kuyisinyathelo esengeziwe kulokho okwenzayo.
Ngiyazi ukuthi ukuthinta kwenzani, bengifuna nje ukwazi ukuthi kungani ubekwenza: P, ngoba nge-nano bekungaphezu kokwanele 😉
Imibhalo emihle kakhulu, umsebenzi omuhle.
Yini oyisebenzisayo ukulungisa ukwaziswa, ngikuthandile kakhulu ukumiswa kwayo.
Sawubona mngani, ngiyabonga ngokuma ubeke amazwana 😀, ngisebenzisa i-Powerline Shell kuyiphrojekthi yomthombo ovulekile ongayithola ku-github. Kulula ukumisa ukuthi ngisebenzisa i-bash ne-Powerline Shell, yize ungayilungiselela ne-zsh.
Isifundo esihle kakhulu. I-terminal config idonsa ukunaka kwami, ungahlanganyela i-config?
Sawubona Koratsuki, hlola lokhu kufundiswa engikwenzayo, ngiyethemba kuzoba wusizo kuwe ukulungisa ukwaziswa. https://blog.desdelinux.net/configurar-bash-prompt-powerline-shell-master/
Kuhle kakhulu ukunikela kwakho Mfowethu, yeka ukuthi kudabukisa kanjani ukuthi angikaze ngiyibone le ncwadi, emasontweni ambalwa edlule bangishiyele umsebenzi wokufaka i-LAMP imvelo kwikhompyutha yami, kodwa kulokhu engikubonayo kulula ukufaka i-XAMPP. Noma kunjalo ngiyabonga ngomnikelo wakho, imikhonzo.
Kuhle, kuchazwe kahle futhi ngendlela elula.
Konke kusebenze kahle.
Sawubona, konke okuchazwa ezithombeni, ngabe kuchazwa nangombhalo? Lokho wukuthi, izithombe zenzelwe izinhloso zokubonisa kuphela? Noma kunezinyathelo okufanele uzenze ezithombeni. Ngibuza ngoba angaboni, futhi angikabi nekhono kakhulu ku-linux okwamanje, ngakho-ke angifuni ukwenza isiphithiphithi haha. Ngakolunye uhlangothi, ngine-ubuntu mate 18. Ingabe lesi sifundo singasetshenziswa? Kusukela vele ngiyabonga kakhulu. Halala!
ULeon S kusho
Izinto ezinhle kakhulu ezinokuqukethwe okubonisayo, lokhu kwenza kube lula ukuqondisa abanye
Phendula uLeon S
- uhlangothi olulodwa luboniswa kabili
- eyodwa emzileni
/ usr / umgqomo /
- nomunye osemzileni:
/ usr / share / application
- Ngicabanga ukuthi kule ndlela yesibili kufanele kube yi-xampp-control-panel.desktop.
- Ngakolunye uhlangothi, ukwenza iningi lezinyathelo, ngangingenazo izimvume, ngakho-ke ngagcina ngidlulisela phambili imiyalo nge «sudo«, ukuze ngivele ngiyidale.
- Kepha ekugcineni lapho ngithola isithonjana kunginikeza umyalezo wephutha:
Umyalo "xampp-control-panel" awukwazanga ukwenziwa.
Yehlulekile ukusebenzisa inqubo yengane "xampp-control-panel" (Imvume inqatshiwe)
- Sengivele ngiyenzile ukuthi isebenze futhi sengibeke nemvume yokwenza ku-usr / bin / xampp-control-panel file.
I-sudo chmod + x / usr / bin / xampp-control-panel
UHarold barboza kusho
Ngiyabonga yilokhu ebengikulahlekile ngenkinga yenqatshelwe imvume.
Phendula uHarold Barboza
2020 lokhu okuthunyelwe kusasebenza kahle!
Ngiyabonga, yangisebenzela, yize ngingaliboni isithonjana se-xampp kodwa ibhokisi elimhlophe kepha akunandaba, nginenkinga yokuthi lapho ngisebenzisa isihleli sekhodi njenge-sublime iyangiphika izimvume zokwenza amafayela kumaphrojekthi we-htdocs. Ngikwazile ukwenza okuthe xaxa ngokunikeza izimvume engikwazi ukuzifunda nokuhlela amafayela kepha angikwazi ukuwenza enze amafayela amasha.
Ngiyabonga isigidi seNexcoyotl ngalesi sihloko !!!, nakubo bonke labo abenza i-blog.desdelinux.net indawo lapho ungathola khona ulwazi esiludingayo !!.
Ngiyabonga ngiyabonga !!
Ngisebenzisa i-linux mint futhi ngingasebenzisa eyodwa echaziwe ngokufinyelela ngoba ngenza izinyathelo futhi aziveli kunoma iyiphi ingxenye yomfanekiso
Ngaphambi kwesikhathi ngiyabonga kakhulu
Ungayakha kanjani iseva elula yewebhu enemigqa emi-5 ye-bash